Okuthrendayo Okuphezulu Oku-5 Kwesandiso Sezinwele Zango-2021 – SL Raw Virgin Hair LLC.
Okuthrendayo Okuphezulu Oku-5 Kwesandiso Sezinwele Zango-2021
Ngakho-ke, uma ufana nabesifazane abaningi kulezi zinyanga ezimbalwa ezedlule, wenze izinqumo ezingathi sína mayelana nezitayela zezinwele ezintsha ngale ndlela yokuvalelwa.
Manje, ufuna okwengeziwe, futhi kufana nendlela yokuthi ngibuyile, baby. Noma sekuqediwe ukuvalelwa, nansi mina entsha.
Ngakho-ke, uma usesimweni sokuthola ugqozi lokunwetshwa kwakho kwezinwele okulandelayo, ake sibheke amathrendi angu-5 aphezulu wokufaka isandiso sezinwele ango-2021 kuze kube manje.
Ngeke ukholwe ukuthi yini efinyelele ku-#4.
1. Indlela ye-Metowi usebenzisa izinwele ze-weft
Uma sicabanga ngezixhumanisi ezincane, sivame ukucabanga ngokufaka i-i-tip micro-link extension. Hhayi ngale ndlela.
I-Metowi Method iyinqubo yokufaka izinwele esebenzisa izixhumanisi ezincane ukufaka izinwele ze-weft. Lokhu kusho ukuthi ngeke udinge i-glue noma intambo ukuze wenze lokho kube phansi.
Ilungele izinwele ezigoqene ngokwemvelo nakuba uzodinga ukunyathelisa usilika ngaphambi kokufakwa. Ukuze unakekele, uzodinga ukuba nensizakalo yokucindezela usilika yenziwe njalo ngemva kwamasonto amabili futhi uqinise ama-micro-link njalo emavikini angu-4-6.
2 Pronto weave usebenzisa izinwele ezilukiwe
Eyaziwa nangokuthi i-weave esheshayo, indlela ye-Pronto iyindlela esheshayo yokufaka i-weave.
Ama-weave asheshayo athandwa ngabesifazane abahambahambayo njengo (Toya Carter) ikakhulukazi labo abangase bangabi namahora ama-4 ukuze bafike kumuntu olungisa izinwele noma benze ama-weave abo. I-Pronto weave ingenziwa ngaphansi kwamahora angu-1.5, nangaphansi.
Ama-weaves asheshayo avame ukuthola i-rap embi. Kodwa uma ucophelela futhi ukwenze kahle, le pronto weave izoba yisisekelo sohlu lwakho lwezinwele lwango-2021.
I-pronto weave iyindlela yokweluka lapho unamathisela khona ama-weft enwetshiwe ezinwele zakho ngqo kukepisi lokuvikela. Ngakho-ke, into yokuqala ukuluka izinwele zakho zibe ama-plaits noma ama-cornrows. Bese ufaka i-cap yakho yokuzivikela ukuze uvikele izinwele zakho nesikhumba kusuka ku-glue. Ungakwazi ukuthunga imiphetho ukuze ubambe ikepisi endaweni.
Okulandelayo, linganisa, sika, futhi ufake izinsimbi zezinwele, uzinamathisele kukepisi. Kuzodingeka uphephethize noma womise emoyeni izinsimbi ukuze uqinisekise ukuthi zisetshenziswa ngendlela efanele. Futhi yilokho - i-weave ngaphansi kwamahora angu-2.
3.Izixhumanisi ezincane ezisebenzisa amathiphu e-Keratin
Okunye ukufakwa kwesandiso sezinwele eziyintandokazi sika-2021 izixhumanisi ezincane zisebenzisa i-keratin I-tips I-tip extensions zezinwele eziMnyama ziyindlela enhle yokwengeza ubude nevolumu kuzinwele zakho noma ugcwalise izikhala ezingafuneki. .
Amathiphu e-keratin afika enikezwe ithiphu, njengoba ecwiliswe ku-wax weprotein. Zingafakwa ngezindlela ezimbili ezihlukene, eyodwa ihlanganiswe nezinwele zakho usebenzisa ithuluzi elishisayo noma intandokazi yethu sisebenzisa ubuhlalu besilinda sethusi ukunamathisela izinwele zakho kanye ne-I-tip. Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, kubalulekile ukufaka uchwepheshe futhi ukhiphe amathiphu e-keratin.
4 Buyela kokuyisisekelo - I-Traditional Sew-in
Abesifazane babuyela ezintweni eziyisisekelo "Zokuthunga Kwendabuko." Isitayela esizanyiwe, esifakazelwe, nesethenjwayo esibuyele ezitayela eziphezulu zezinwele eziMnyama ngo-2021, ngisho nakwabesifazane abathile baseCaucasus naseLatino abahlola umzila wokuthunga.
Lokhu kuhlanganisa ukuluka izinwele zakho zemvelo phansi ezinye zezinwele zakho zishiywe ngaphandle ukuze uvale amathrekhi. Khona-ke, sekuyisikhathi sokuthunga amathrekhi e-weft usebenzisa izandiso zezinwele zomuntu ezisezingeni eliphezulu ezinenaliti nentambo yokweluka.
5. I-Brazilian Knotting isebenzisa izinwele ze-Keratin i-amathiphu
Ukwengeza amathrendi ethu aphezulu angu-5 esandiso sezinwele zango-2021 izandiso zezinwele ze-Brazilian Knot zisebenzisa izinwele ze-Keratin i-tips.
Lena indlela yokwelulwa kwezinwele ze-strand-by-strand evumela ukufinyelela okugcwele ekhanda lakho nesitayela sezinwele. Ayikho imikhawulo mayelana nokuthi zingakanani izinwele ongazisebenzisela umucu ngamunye, ngakho-ke amathuba akho evolumu awapheli.
Le ndlela isebenzisa intambo yokunwebeka ekhethekile engadingi iglue noma ukushisa ukuze ifakwe.
Abesifazane bayasithanda lesi sitayela ngenxa yokuguquguquka kwaso, futhi lokhu kuvumelana nezimo kuyanda ngokusebenzisa amathiphu ezinwele ze-keratin ukulawula ukuthi zingaki izandiso ozingeza ezinweleni zakho
Ulungele ukuzama esinye salezi zitayela ezi-5 eziphezulu zokunwetshwa kwezinwele zika-2021? Ungaqalisa khona manje ngezandiso zezinwele ezivela eqoqweni le-i-tip ye-SL Raw Virgin Hair micro-link. Ngakho-ke, uma ufuna amathiphu e-Keratin I- esixhumanisi sakho esilandelayo se-Micro noma isevisi ye-Brazilian Knotting, phequlula iqoqo lethu lezinwele ze-I-Tips.
Posted by Taylor Hansen on Novemba 14, 2021 11:20